KU BiC तथा बायोटेक्नोलोजी ०७ ब्याच को आयोजना मा भएको “3rd All Nepal Biotechnology Football Tournament” को उपाधि ह्वाइट हाउस ले जितेको छ । केयु स्टेडियम, धुलिखेल काभ्रेमा शुक्रबार दिउँसो भएको अत्यन्तै रोमाञ्चक खेल मा ह्वाइट हाउस टिमले, केयु को स्टाफ टिमलाई ३-२ गोल ले हराउँदै, उपाधि माथि कब्जा जमाउन सफल भएको हो ।
पहिलो हाफ मा शुन्य गोल को बराबरी मा रहेका टिमहरु खेल को दोस्रो हाफ मा भने गोल गर्न सफल भएका थिए । ह्वाइटहाउस का लागि प्रवेश भट्टराई ले पहिलो गोल गरेका थिए भने केयु स्टाफ टिम का मनोज बडु ले, पाएको पेनल्टि को सदुपयोग गर्दै पहिलो गोल फर्काउँदै खेल बराबरी मा पुर्याएका थिए । खेल को ६३ औँ मिनेट मा ह्वाइट हाउस का केशव बहादुर कार्की ले गोल गर्दै टिमलाई १ गोल को अग्रता दिलाएका थिए । तर खेल मा ह्वाइट हाउस ले यो अग्रता धेरै बेर कायम गर्न सकेन । ६५ औँ मिनेट मा प्रज्वल बस्नेत ले केयु स्टाफ को लागि अर्को १ गोल गर्दै, खेल लाई बराबरी मा पुर्याए ।
खेल अवधिभर दुबै तर्फबाट २-२ गोल भएकोले खेल ‘एक्स्ट्रा’ समय मा लम्बियो । थपिएको समय को सदुपयोग गर्दै ह्वाइट हाउस का अम्बर बहादुर कार्की ले ह्वाइट हाउस को लागि गोल गर्दै खेललाई ३-२ मा पुर्याए । केयु स्टाफ टिम का किपर को हात बाट बल फुत्किएर गोल हुँदा सबैलाई विश्वकप को अस्ति को इंग्ल्यान्ड को किपर को याद आएको थियो ।
तेस्रो अल नेपाल बायोटेक्नोलोजी फुटबल टुर्नामेन्ट को समापन कार्यक्रम मा बिजेता र खेलाडिहरुलाई विद्यार्थी कल्याण केयु का डाइरेक्टर प्रोफेसर डा. जंगम चौहान तथा ध्रुव प्रसाद गौचन र समिरमणी दिक्षित ले संयुक्त रुपमा पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो । समापन का अवसर मा बोल्दै उहाँहरुले ‘खेलकुद’ लाई पनि विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो भने, खेल सफतापुर्वक सम्पन्न गरेको मा आयोजकलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो ।
समापन समारोह मा ह्वाइट हाउस का प्रवेश भट्टराई ले ‘हाइ स्कोरर’ को उपाधि जिते, उनले खेल अबधिभर ४ गोल गरेका थिए । त्यस्तै केयु स्टाफ का सुजित श्रेष्ठ ‘बे्स्ट प्लेयर’ घोषित भएका थिए । “तेस्रो अल नेपाल बायोटेक्नोलोजी फुटबल टुर्नामेन्ट” मा, केयु बाट विद्यार्थी को ४ टिम र १ स्टाफ टिम सहित ५ वटा टिम ले सहभागिता जनाएका थिए भने लर्ड बुद्ध, सान इन्टरनेशनल तथा ह्वाइट हाउस को १-१ वटा टिम गरि जम्मा ८ वटा टिम को सहभागिता रहेको थियो । खेल सञ्चालन रेफ्री दामोदर धिताल ले सञ्चालन गरेका थिए भने, लाइन्सम्यान को रुपमा क्षीतिज सुवेदी र विमान श्रेष्ठ रहेका थिए ।
खेल को अन्त्यमा हामी सँग कुरा गर्दै ह्वाइट हाउस का टिम कोच नविन न्यौपाने ले, खेल निकै सौहार्द रहेको प्रतिक्रिया जनाउनु भयो । तर रेफ्रि का केही निर्णय मा चित्त नबुझेको संकेत गर्दै, आगामी दिन मा रेफ्रि बाहिर बाट ल्याउन सुझाउनुभयो । म्यानेजम्यान्ट निकै राम्रो भएको प्रशंशा गर्दै, खेलाडिलाई बस्नलाई बेञ्च को व्यवस्था खेलमैदान मा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफू भर्खर मात्र ह्वाइट हाउस को प्रशिक्षक भएको बताउँदै, आफुले विशेषत खेलाडिलाई ‘पोजिसन’ वाइज बल खेल्न प्रेरित गरेको बताउनुभयो । प्रशिक्षक नविन न्यौपाने काठमाडौँ को ‘एन आर टि’ बाट फुटबल खेल्नु हुन्छ ।
उपाधि जित्ने, ह्वाइट हाउस टिमलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना !!!
II yr lai haraera white house le cup jityo so sad..